Sunday 3rd of July 2022 / 10:24:51 AM
काठमाडौ ,श्रावण -८ कागेस्वरी -मनोहरा नगरपालिकाको मेयर कृष्ण हरि थापा द्वारा नगरबासीको चाहाना ,आवश्यकता र प्रत्यक्ष सम्बाद को लागि श्रावण १ गते देखि "टोल- टोलमा मेयर" कार्यक्रम सुरु गरेको छन।उक्त कार्यक्रम गागलफेदी बाट सुरु भएको&nbs
नेकपा प्रदेश २ का अध्यक्षसमेत रहेका सांसद साहले आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकको विशेष समयमा ब
लम्जुङ्ग । कोरोना संक्रमण रोक्न लकडाउन बढ्दै गएपछि जिल्लाको मध्यनेपाल नगरपालिकाले बाँझो जमिनमा खेती बढाउने योजना अघि सारेको छ । बाँझो जमिनमा तरकारी र फलफूल खेती गर्ने युवालाई प्रतिरोपनी ५ हजार रुपैयाँसम्म नगरपालिकाले अनुदान दिने भए
पाँचथर । मिक्लाजुङ गाउँपालिकाले ४० मुरीभन्दा बढी धान उत्पादन गर्ने परिवारलाई रु एक लाख पुरस्कार दिने भएको छ। कोभिड-१९ को महामारी तथा लकडाउनका कारण गाउँपालिकाभित्र उत्पन्न हुन सक्ने खाद्यान्न सङ्कट न्यूनीकरणका लागि
काठमाडौं, २६ बैशाख । युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्न सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि लागत खर्चमा न्यूनतम् २५ प्रतिशत प्रतिफल सुनिश्चित गरिदिने तयारी गरेको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत यस्तो
बीमा समितिले निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूलाई जिल्ला तोकेर बाली तथा पशुपंक्षी बीमाका लागि काम गर्न निर्देशन दिएको छ। बाली तथा पशुपंक्षी बीमा व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्नको लागि बीमा समितिले सबै जिल्लामा कम्तीमा एक बीमा कम्पनीको उपस्थिति अनिवार्य गर्न जिल्
सुक्खा पाखो जमिनमा रिचार्ज पोखरी ख
कञ्चनपुरमा रातो केराको व्यवसायीक खेती सुरु भएको छ । ‘सुगर फ्री’ का रूपमा चिनिने यो केराको नेपालमै पहिलो पटक खेती सुरु गरिएको हो । क्याल्सियम र चिनीको मात्रा कम हुने भएकाले मधुमेहका बिरामीका लागि उपयुक्त मानिने यो केराको बोट र फल दुवै र
दोलखा । दोलखाको मेलुङ गाउँपालिकामा आलु महोत्सव २०७६ हुने भएको छ । गाउँपालिकाको आयोजनामा आलुबाट आत्मनिर्भर बनाउँदै समृद्ध गाउँ निर्माण गर्ने उद्देश्यले सो महोत्सवको आयोजना गर्न लागिएको हो ।यहि कात्तिक १ र २ गते मेलुङ गाउँपालिका वडा नम्बर ३ स्थित भु
उद्गम स्थल दक्षिण यूरोपमा रहेको केशरको माग दिन प्रतिदिन बढ्दो छ । यसलाई विश्वकै महँगो र दूर्लव कृषि उपजको रुपमा लिईन्छ । प्रति के.जि १० लाखमा बिक्रि हुने केशर नेपालमा भने पर्याप्त मात्रामा उत्पादन भएको पाईदैन । नेपालको पछिल्लो तथ्याङ्क हेर्ने हो भ
अंगद यादव / नवलपरासी पश्चिम १७ भादौ । ‌नवलपरासी पश्चिम जिल्लाको प्रतापपुर गाउँपालिका वडा नं ८ गंगापुरमा रहेको इन्द्रा सुगर मिलको सिरा टंकीको पाइप फुटेपछि मिलको वरिपरि किसानले लगाएको लगभग चार बिगहा उखु सुकेर पुर्ण रुपमा नष्ट भएको छ ।
अंगद यादव / नवलपरासी पश्चिम १२ भदौ ।
नवलपरासी पश्चिम जिल्लाको रेगंहिया नाका बाट अबैध रुपमा नेपाल ल्याउदै गरेको ६ वटा भारतीय जंगली बँदेल सशस्त्र प्रहरी अाउट पोष्ट गुठी परसौनीले पक्राउ गरेको छ ।
नवलपरासी पश्चिमको प्रत
डिग्री पढेकी एउटी युवती गाईको मलमुत्र स्याहार्छिन् भनेको सुन्दा धेरैलाई आचश्र्य लाग्न सक्छ । यस्ता पढेलेखेका धेरै युवति विदेश पसिरहेका छन् । कतिपय सरकारी जागिर खोज्दै भौतारी रहेका छन् । तर बाँके कोहलपुरकी शारदा शर्मा गाइपालनबाटै लखपति बनेकी छन् ।
गोपाल चन्द/असार १०, रोल्पा । ‘जब फर्ममा एउटा बाख्राको पाठा जन्मिन्छ, अनि उसले मलाई भन्छ, सेवा गर । समय पुगेपछि उसले मलाई सोध्छ, तिम्रो समस्या केहो ? उसलाई सेवा गरे बाफत मेरो परिश्रमको भ्यालु माग्छु, अनि मलाई सबै श्रमको मूल्य तिरेर जान्छ
भक्तपुर । भक्तपुरको प्रसिद्ध एवं ऐतिहासिक रानीपोखरी सर्वसाधरणका लागि खुल्ला गरिने भएको छ। नेपाली सेनाको सैनिक आवासीय महाविद्यालय हाताभित्र रहेको उक्त पोखरी सर्वसाधरणको लागि खुला गर्न सेना सहमत भएको हो।
भक्तपुर नगरपालिका र नेपाली सेन
प्रति केजि १० लाख पर्ने केशर खेती गर्ने कि ? केशर खेतीबारे सम्पुर्ण जानकारी, पढ्नुहाेस् र सेयर गर्नुहाेस्
म स्थल दक्षिण यूरोपमा रहेको केशरको माग दिन प्रतिदिन बढ्दो छ । यसलाई विश्वकै महँगो र दूर्लव कृषि उपजको रुपमा लिईन्छ । प्रति के.जि १० लाखमा बिक्रि हुने केशर नेपालमा भने पर्याप्त मात्रामा उत्पादन भएको पाईदैन । नेपालको पछिल्लो तथ्याङ्क हेर्ने हो भने ७
चट्यांग लागेर नवलपरासीमा गाउपालिका सदस्य सहित एकै परिवारका तीन घाइते
अंगद यादव /नवलपरासी पश्चिम २० बैशाख ।
नवलपरासी पश्चिमीमा शुक्रबार बिहान आएको हावाहुरी र चट्यांगमा परि बुवा आमा र छोरा गरी तीन जना घाइते भएका छन् ।
प्रतापपुर गाउँपालिका वडा नं.-६ कठहवा बस्ने ६० वर्षको गोबरी मिया, ५५ वर्षकी हदिसु
नवलपरासीको प्रतापपुर-सुस्तामा बृहत सरसफाइ कार्यक्रम सम्पन्न
अंगद यादव/नवलपरासी पश्चिम २३ चैत्र ।
नवलपरासी पश्चिमकाे प्रतापपुर गाउपालिका वडा नं.- ९ बेलाटारी र सुस्ता गाउपालिको बडा नं.-२ फेनहरामा बृहत सरसफाई कार्यक्रम सम्पन्न भएकाे छ ।
सरसफाइ कार्यक्रममा सहभागी भएका प्रदेश संसाद अजय